Sida loo Delete Videos ka iPhone in Dufcaddii
> Resource > iPhone > Sida loo Delete Videos ka iPhone (iPhone 5s iyo 5c iPhone mid)
Qaar badan oo dadka isticmaala iPhone sida filimada iibsigu dukaanka Lugood. Waa arrin sahlan. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo filimada aad u badan oo ku saabsan iPhone, aad iPhone waxaa laga yaabaa in ka mid ah xusuusta. Si aad lacag la'aan ah ilaa meel iPhone aad, waxaa laga yaabaa inaad tirtirto videos ka iPhone. Waa hagaag, tirka hal ama laba filimada waa u fududahay. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la furo Videos app aad iPhone. Raadi si aad filim doonayo oo ay simbiriirixan fartaada ka bidix ilaa midig ilaa badhanka cas Delete muuqataa. Markaas, waxaa tirtirto. Sidee ku saabsan aad qabtid badan oo videos? Ma qabtaa weli sii cel-tallaabo la mid ah mar kale iyo mar kale?
Dhab ahaantii, aad leedahay si qumman oo kale. Si aad u tirtirto filimada ka iPhone, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo removel qalab iPhone video - Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Tani qalab video saarista iPhone kuu ogolaanaysaa inaad soo saarto filimada oo dhan aad iPhone kaliya 4 qasabno.
Saar videos ka iPhone in Dufcaddii
In qaybta soo socda, waxaanu ku sharixi doonaa sida loo saarto iPhone videos in Dufcaddii. Download this qalab saarista iPhone on your computer. Markaasuu nagu soo biiraan in ay aqoon u leh tallaabooyinka fudud.
Fiiro Gaar ah: Wixii labada Windows iyo dadka isticmaala Mac, waxaad tagi kartaa iyada oo talaabooyinka soo socda si ay u tirtirto iPhone videos aad. Halkan, waxaan qaadi version daaqadaha sida tusaale.
Tallaabada 1. Daahfurka barnaamijkan oo waxay qotomiyeen aad iPhone
Ku rakib this iPhone qalab movie saarista on your computer ka dib markii duuban. Markaasaa waxaa u abuurtaan by double magcaabo Wondershare file TunesGo.exe aad kombuutarka. Connect aad iPhone in aad PC via cable USB la socota iPhone ah.
Your iPhone la soo bandhigi doonaa on interface ugu weyn mar this iPhone qalab filim ka saarida waxaa lagu ogaadaa. Markaas waxaad ka arki kartaa dhammaan waxyaabaha aad iPhone ku qoran yihiin geedka bidix ee kooxda buugga.
Fiiro gaar ah: Waa lagama maarmaan in aad baxdo iyo rakibi Lugood on your computer ka dib markii ay Wondershare TunesGo.
Tallaabada 2. Delete videos on iPhone
Si aad u tirtirto iPhone videos, ugu horreeya oo dhan, guji "Media" on geedka bidix ee kooxda buugga. Markaas suuqa kala warbaahinta lagu soo bandhigi doonaa guriga dhankiisa midigta. Guji "Movies" at line ugu sareeya.
Markaas uu furmo suuqa maamulka filimka, dooran videos aad rabto in aad ka saarto. Markaas riix "Delete". Marka uu furmo suuqa laydi yar oo u muuqata oo loo akhriyo "Ma hubtaa in aad rabto in aad tirtirto, filimada uu soo xulay on iPhone?", Waxaa idinku waajib ah in guji "Haa". Markaas qalabka iPhone filim ka saarida wuxuu bilaabaa inuu kaa caawiyo in aad si deg deg ah u tirtirto filimada kuwan. Inta lagu guda jiro nidaamka dalka looga saarayo, waxaad lahaa si wanaagsan oo aan barkinta aad iPhone.
Waa hagaag, in ay tahay. Soo saarida weyn videos ka iPhone waa cajiib fudud oo fudud, sax?
Ka sokow filimada ka sooci doonaa iPhone, in aad PC aad / Lugood, iyo aayadda xigeenka dhoofin karto filimada iPhone. Dhanka kale, waxa aad awoodi kartaa in filimada gurmad si Lugood iyo sidoo. By jidkii, Wondershare TunesGo taageertaa macruufka dambeeyay 9 6s qalabaysan iPhone (Plus) iyo iPhone 6 (Plus).
iPhone 6s Data Recovery: 3 Siyaabaha la isu soo ceshano iPhone 6s (Plus) Khasaaray Files